By vijayafm on	 November 14, 2017 अन्तरवार्ता, फोटो फिचर, राजनीति, विविध खबर, स्थानीय
संघ तथा प्रदेशको चुनावको मिति नजिकिएसँगै सरगर्मी तातिरहेको छ । नवलपुर जिल्ला क्षेत्र नं १ को चुनाव पनि रोचक बन्दैछ । नेपाली काँग्रेस र वामगठबन्धनबीच नै यो क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । दुईपटक यसै क्षेत्रवाट चुनाव जित्नुभएका नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला काँग्रेसका तर्फबाट पुन चुनावी मैदानमा उत्रनुभएको छ । प्रस्तुत छ १० वर्ष यो क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गरिसक्नुभएका कोईरालासँग अबको चुनावी एजेन्डा र यो क्षेत्रका लागि उहाँका योजनाका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
डा. कोइराला, यहाँलाई स्वागत छ
धन्यवाद छ, यहाँलाई र यस क्षेत्रको लोकप्रिय पत्रिका विजय खबर पत्रिकालाई ।
जोडतोडका साथ अघि बढिरहेको छ । म आइतबारदेखि चुनावी अभियानमा जुटेको छु । आइतबार यस क्षेत्रको पहाडी इलाकाका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए । गोरखामा पनि चुनावी सभामा सहभागी भएर फर्किएको छु । सोमबार पनि यस क्षेत्रका आधा दर्जन कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछु । घरदैलो अभियान पनि जारी छ । अब चुनावी अभियान तीव्ररुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
अलि ढिलो अभियानमा लाग्नुभयो नि किन ?
पक्कै पनि अलि ढिलो भएको हो । पार्टीको महामन्त्री भएका हिसाबले पार्टीका जिम्मेवारीहरु पनि छन् । देशका अन्य जिल्ला र क्षेत्रहरुमा पनि पुग्नुपर्ने भएकाले केही ढिलो भएको हो । अब भने आफ्नै क्षेत्रमा चुनावी अभियानमा केन्द्रित भएर लाग्ने छु ।